डा.भट्टराईको राष्ट्रवाद सिके राउतमा विलिन | abc.com.np
पछिल्लो समयमा नेपालको घटनाका सम्बन्धमा एम्नेष्टी ईन्टरनेशनलमा ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत बेवास्ता गरेको भन्दै नेपाल शाखाका अन्य आठ पदाधिकारीले राजीनामा दिएका छन् । यसरी राजीनामा दिनेमा उपाध्यक्ष प्रताप पौडेल, महासचिव डिकप्रसाद घिमिरे, कोषाध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल तथा सदस्यहरु अर्जुन अधिकारी,पद्यमनी थापा, अञ्जुदेवी अर्याल, शेषकुमार निरौंला र हेरम्ब भट्टराईलगायत छन् ।
फेसबुकमा मानव अधिकारर्मी उत्तम पुडासैनी लेख्छन्–‘नेपाल आमालाई बेश्याको संज्ञा दिने तथा नेपाल आमाको अस्मितामाथि प्रहार गर्ने सीके राउत जस्ता कुतत्वले शिर उठाउन पाउनु हुन्न । नेपाल आमाको अस्मिता र नेपालीको स्वाभिमानमाथि धावा बोल्ने सिके राउत जस्तालाई संरक्षण गर्नु कसैका लागि पनि पाच्य हुन्न । पहाडीको धारणामाथि असहमति राख्नेहरुले सीके राउतको भनाई र उनको कुकृत्यप्रति समर्थन गरेकै हुन ।’ पुडासैनीका अनुसार एउटा सच्चा मानव अधिकारकर्मीका लागि कोही आफ्नो र पराई हुँदैनन् । र, त्यो सत्यतालाई पहाडीले उजागर गरिदिए ।
विदेशीको ईशारामा चलिरहेका राउतले तराईमा अलग राज्यको माग गर्दै हिडेका छन् भने पहाडी महिलालाई पछिल्लो पटक बेश्याको उपमा दिएपछि उनी सर्वाधिक विवादमा परेका हुन् । पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले समेत सिके राउतलाई भित्रभित्रै सहयोग र समर्थन गरिरहेको स्रोतले बतायो । डा. भट्टराई आफै विवादित ब्यक्ति हुन् भने उनलाई समेत नेपालमा भारतीय गुप्तचरी संस्था ‘रअ’ सँग जोडेर हेरिन्छ । सिके र भट्टराईको बारम्बार सम्पर्क हुने गरेको समेत स्रोतको दावी छ । सिके राउत भारतीय गुप्तचरी संस्था ‘रअ’ र अमेरिकी जासुसी सयन्त्र सीआईएबाट परिचालित ब्यक्ति हुन् ।
अर्कोतिर, नेपाल आमालाई बेश्याको रुपमा चित्रण गर्ने सीके राउतलाई एम्नेष्टीको संरक्षण हुनुुहुन्न भन्ने मानव अधिकारकर्मी पहाडीको धारणापछि अनेक बहश सुरु भएको छ । नत्र नन्दप्रसाद अधिकारीले न्यायको भिख माग्दै देह त्याग गर्नु पर्ने अबस्था आउने थिएन । त्यतिबेला खै पहाडीले के बोले ? नन्दप्रसादको सवालमा एम्नेष्टी किन चुक्यो ? सीके राउतको सवालमा किन ज्यादा उत्तेजित भयो ? भन्ने मानव अधिकारकर्मीको संख्या पनि कम छैन् । यसबाट पनि नेपालका मानव अधिकारकर्मी नीति र नियममा भन्दा पनि डलरमा चलेका छन् भन्ने कुरा सर्वसाधारणले बुझ्ने मौका पाएका छन् । मानव अधिकारवादीको एउटा समूह यतिखेर पहाडीको उक्त कदमको आलोचना गर्दै आफ्नै मातृभूमिलाई बेश्या र चरित्रहिनको संज्ञा दिने राउतको वकालतमा लागेको छ भने अर्को समूह असहमति जनाउँदै बाहिरिएको छ ।
यसअघि सिके राउत पक्राउ पर्दा दर्जनौं मानव अधिकारकर्मीले विज्ञप्ती जारि गर्दै स्वतन्त्र विचार राख्न पाउने अधिकार राज्यले कुण्ठित गर्न नमिल्ने भन्दै उसलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेका थिए । मुलुक टुक्राउने अभिब्यक्ति दिने, सोही डिजाईन अनुसार सञ्चारमाध्याम परिचालन गर्ने, गुरिल्ला बनाउने, तराईको नयाँ नक्सा, नयाँ झण्डा, राष्ट्रिय गान तयार पार्ने ब्यक्तिलाई संरक्षण गर्नुपर्छ ? भन्ने अधिकार मानवअधिकार ऐनको कुन पानामा उल्लेख भएको छ ? राज्य बलैमा सचेत हुनु पर्ने देखिएको छ ।
अर्कोतिर, माओवादीको १२ बर्षे जनयुद्धमा नेपालका मानव अधिकारकर्मी प्रायजसो सबै माओवादीका गुलाम मात्र बने । सरकारी पक्षबाट भएका ज्यादतीलाई मात्र उचालेर मानव अधिकर्मीले सरकारको उछितो काटे । तर, नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सिपाही मारिँदा होस वा सर्वसाधारणलाई क्रुर याताना दिएर मार्दा उनीहरु कहिल्यै बोलेनन् । नत्र नन्दप्रसाद अधिकारीले न्यायको भिख माग्दामाग्दै मर्नु पर्ने अबस्था आउने नै थिएन । मानव अधिकारकर्मीको धर्म भनेको कसैको पक्ष वा विपक्षमा नलागि पीडितलाई न्याय दिलाउनु मात्र नभई मुलुकमा द्धण्द्धहिनता बढ्नुबाट रोक्नु पनि हो । तर, नेपालका मानव अधिकारकर्मीहरुको हकमा त्यो कहिले पनि सत्य सावित हुन सकेन । नेपालका चर्चित मानव अधिकारकर्मीहरु जो एकताका फ्रि–तिब्बतको वकालत गर्न र एक चीन नीति विपरित तिब्बतीलाई सहयोग र समर्थन गर्न कहिल्यै पछि परेनन् । यसरी फ्रि–तिब्बतको वकालत गर्ने मानव अधिकारकर्मीहरुको पनि सूचि लामै छ । जसमध्ये राष्ट्रिय मानवधिकार फाउण्डेसनका भवानी खरेल, नेपाल मानव अधिकार संगठनका सुदीप पाठक, ईन्सेकका सुबोध प्याकुेरल, एम्नेष्टी ईन्टरनेशनलका गोपाल सिवाकोटी, प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठलगायतको नाम बेला–बेलामा विवादित बन्ने गरेको छ ।
नेपालका मानव अधिकारकर्मीहरुको भूमिकाप्रति सर्वसाधारणले पहिलेदेखि नै शंकाले हेर्ने गरेका छन् । मुलुकको संवेदनशिल विषयमा समेत गुट–उपगुटका आधारमा सही र गलत भन्ने प्रवृत्ति बढेपछि नेपालका प्रायजसो मानव अधिकारकर्मी विवादित बन्न थालेका हुन् । नेपालकै मानव अधिकारकर्मीको गलत नियतका कारण नेपाली सेनाको उच्च पदमा रहेका कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा थुनिन पुगेका हुन् । युद्ध अपराध र मानव अधिकार हननको मुद्दा नै चलाउने हो भने पनि माओवादीका नेता कोही पनि पक्राउ नपर्नबाट बच्ने कुनै आधार देखिन्न भन्दै मंगलबार जनप्रहार साप्ताहिकमा समाचार प्रकाशित भएको छ ।